USony ubanga ukuba ukuphela komjikelo wePlayStation 4 kusondele. | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Iiconsoles, Izaziso
USony ubambe inkomfa yabatyali zimali eTokyo kule mpelaveki. Kuyo, zityhilwe izinto ezininzi ezibalulekileyo. Phakathi kwabo kutyhilwe ukuba ukuphela komjikelo wePlayStation 4 sele kusondele. Ikhonsoli yasungulwa kwimarike ngo-Novemba ka-2013 kwaye sele ithengise phantse i-80 yezigidi zeeyunithi kwihlabathi lonke ngalo lonke elixesha kwimarike.
Nangona kubonakala ngathi umjikelo weconsole uya esiphelweni, ngakumbi xa ujongene nokhuphiswano olukhulayo olusuka kwizikhombisi ezinje ngeXbox One X kunye nokuqhubela phambili okukhulu kweNintendo switch. Ke kubonakala ngathi USony sele ecinga malunga nekhonsoli elandela iPlayStation 4.
Iya kuba sele ikulo nyaka xa ukuphela komjikelo weSony console kuqala. Oku kungqinwe ngumongameli wenkampani yaseJapan kulo msitho. Ngokukhawuleza inqanaba elitsha liqala kwicandelo lalo lekhonkco. Ndiyathemba ukuba kulo nyaka siza kuzazi ngakumbi iinkcukacha malunga nePS5.
Nangona kubasebenzisi abane-PlayStation 4, Ezi ndaba azithethi ukuba inkampani ayizukuyihoya ikhonsoli yayo. Kungenxa yokuba baphawule ukuba baceba ukukhupha eyona midlalo ilungileyo, kwaye bazakuzama ukuyivuselela ukugcina impumelelo yabo iphila. Yiyo loo nto, umxholo kaSony uya kuhlaziywa rhoqo.
Izicwangciso zenkampani kukuqinisa ingqalelo kwi-PlayStation brand phakathi kwangoku ukuya ku-2021. Ukuze isizukulwana esilandelayo seekhonsoli sibe nendlela egangathiweyo. Nangona kuya kufuneka sibone ukuba inkampani icwangcise ntoni malunga noku. Kuba kuya kuba nzima ukuphinda impumelelo ebenayo i-PlayStation 4 kwintengiso.
Amaxesha otshintsho ayasondela kwinkampani yaseJapan. Njengoko isiphelo sale khonsoli sithembisa ukuba linyathelo elibalulekileyo kuphuhliso lwayo kwimarike. Ngokunokwenzeka kwiinyanga ezimbalwa ezizayo izicwangciso zabo ziya kutyhilwa ngendlela ethe kratya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » USony uyavuma ukuba isiphelo somjikelo wePlayStation 4 sele siza kufika
Inkululeko yeXtorm, isiseko esifanelekileyo sokutshaja ngaphandle kwamacingo